AMAKHADI AMA-21 AHLEKISAYO EEVALENTINE ATHENGE NGOKU - UBUDLELWANE
Eyona Ubudlelwane Amakhadi eeSuku zeValentine eziHilarious onokuzithenga ngoku
La makhadi ahlekisayo aqinisekile ukwenza i-S. uncumo.
Ukuhlaziywa ngoJan 06, 2021 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Kungakhathaliseki ukuba ulwalamano lwakho luni, mhlawumbi ufuna phezulu kwaye uphantsi ukuze uhlekise IiValentine ikhadi lokukhapha isipho sakho se-SO. Ikhadi elihambelanayo kubalulekile ukunika nayiphi na isipho, ngakumbi kwiSuku lweValentine. Kodwa uninzi abathengisi abakwi-Intanethi ababonelela ngezinto zokubhala , kuhlala kunzima ukuba ufumane uyilo olugqibeleleyo. Ukwenza ubomi bakho bube lula, sikwenzele ivenkile ngokuqokelela amakhadi oSuku lweValentine apha. (Kwaye, ukuba usadinga umbono wesipho sokugqibela, sinayo ndakugquma .)
Nabani na kubudlelwane unokunxibelelana nala makhadi ahlekisayo apha ngezantsi. Nokuba ungumntu ohlekisayo ozichazayo okanye wabelana ngeziqhulo zangaphakathi, ikhadi likaValentine elihlekisayo yeyona ndlela yokubonisa uthando lwakho ngembeko yeholide ekhethekileyo. Ukusuka kwiipun yokutya ukuya kwimigca yokuthwebula iitshizi, iqabane lakho liya kukuvuyela ukufumana nayiphi na kwezi imibuliso emnandi . Dlulisa amehlo ekukhetheni kwethu phezulu, kwaye ukuba ufumana enye oyithandayo, yithenge kanye kanye.
Bazise ukuba uyabathanda ngaphezu kukaStanley othanda uSuku lwePretzel ngeli khadi likaSuku lweValentine oluhlekisayo oluphefumlelwe IOfisi .
Isoso seAvocado Ikhadi losuku lweStanley Hudson pretzel, $ 6, Etsy.com
Olu khetho lulungele umntu othanda i-shrimp tempura phantse ngokungathi uyakuthanda. Nika eli khadi kunye nee-roll zabo abazithandayo zangoku-ubungqina be-V-Day ekhoyo.
Umthombo wePhepha Ikhadi olithandayo likaSushi Valentine, $ 5, IPhephaSource.com
Kwimeko apho uthando lwakho lwalungabonakali, bakhumbuze ngeli khadi likaValentine. Siyabathembisa ukuba bayayithanda.
Crimson kunye neClover Isipho Ikhadi loSuku lweValentine oluhlekisayo, $ 6, Etsy.com
Ukuba u wadibana lokusebenza ukuthandana , eli khadi likaValentine elihlekisayo alisebenzi. Emva kwayo yonke loo nto, zezona zinto zibalaseleyo okhe watyibilika ngqo kuzo.
Isibini sepuns Ikhadi lasekunene eliswiti, $ 5, Etsy.com
Banike iodolo yabo yokuya kunye neli khadi ukubenza (kunye neencasa zabo) bonwabe.
Cazulula Ikhadi le-Nugs kunye ne-Kisses Day's Valentine, i- $ 5, Amazon.com
Isilumkiso seSpoiler: Abakwazi ukubiza i-duo engcono, kuba nina nobabini nigqibelele.
Hat kunye neMonocle ephezulu ikhadi elimnandi leValentine, $ 6, Etsy.com
Ikhadi leValentine elihlaziyekileyo kufuneka ulithengele ingcali yebhodi ye-charcuterie ebomini bakho.
Umthombo wePhepha Ikhadi likaBrie leValentine yam, $ 5, IPhephaSource.com
Uyazi ukuba umfumene umphefumlo wakho xa uzimisele ukubanika isiqwenga sokugqibela sebhekoni. Bonisa uthando lwakho ngeli khadi likaValetine elihlekisayo eliya kuthi ngokuqinisekileyo lihlekise.
UCarolyn Uzoba Ikhadi loSuku lweValentine oluhlekisayo, $ 6, Etsy.com
Ukuba uchitha iholide ngokwahlukana, sukuba noxinzelelo- eli phepha-khadi likaValentine elihlekisayo ngumbuliso ogqibeleleyo wokubeka uncumo ebusweni babo.
IRifle Iphepha Co. Ukulayishwa kwenqanawa yothando lokuposa ikhadi, $ 10 yeekhadi ezili-10, ThePrincePhu.com
Ngaba uhlala usokola ukufumana indawo yokutya? Awuwedwa-kodwa i-TBH, ngekhe uyazi impendulo. Banike eli khadi loSuku lweValentine kunye namakhadi ezipho ezimbalwa kwiindawo zabo abazithandayo zokutya ukuze uncede uthathe isigqibo kwixesha elizayo xa ungaqinisekanga ukuba uza kuya phi.
Iphepha lomntu elibambayo ikhadi elimnandi leValentine, $ 6, Etsy.com
Eli khadi lisikhumbuzo sokuba uyakuhlala ubathanda… nokuba iisokisi zabo ezimdaka ziyaphoswa yingobozi yokuhlamba iimpahla.
NguBrie Ndiyakuthanda ikhadi lokubulisa, i- $ 7, Amazon.com
Siva ukuba uyilo lwekhadi leValetine luya kuyenza i-SO yakho. uluve uthando, ngakumbi ukuba isithethe sakusasa sangeCawa sibandakanya ikofu kunye nayo yonke into yebagels.
Yenziwe nge-BV Ikhadi leValentine, $ 7, Etsy.com
IWunderkid Ubugcisa Ikhadi loSuku lweValentine oluhlekisayo, i- $ 10, Amazon.com
Olu luyilo luyimfuneko kumntwana 'wama-90s. Yenza ngokwezifiso ngakumbi nenqaku elikhethekileyo lothando.
Sketchy Shicilela Co Ikhadi le-Valentine elinemixholo engama-90, ukusuka kwi- $ 4, Etsy.com
Ngaba le asiyiyo inkcazo yomtshato? Khumbuza i-S.O yakho. uya kuhlala ufuna ukuhlala kunye, nokuba kwenzeka ntoni. Kwaye kuba iza ipakethi yesithathu, yabelana ngayo nabanye abahlobo okanye amalungu osapho aya kulithanda ikhadi likaValentine elihlekisayo.
Weareyawn Hang out Forever amakhadi okubhala, $ 16 for 3, Umbutho6.com
Xa uyinkcazo #Iinjongo zoBudlelwane, eli khadi lihlekisayo likaValentine liyimfuneko. Banike ifoto enezinto ezibini ukuze nibe nobungqina.
Uyilo lukaLaila Me ikhadi elimnandi leValentine, $ 3, Etsy.com
Ukuthenga i-shushu-lover eshushu? Eli khadi likaSuku lweValentine oluhlekisayo lilungile kumntu ongenakho ukutya ngaphandle kwe-sriracha.
IMaplelon Ikhadi loSuku lweValentine eShushu, $ 6, Amazon.com
Ukuba u-S. Unayo encinci Ukutyeba kweBravo , le Imigaqo yeVanderpump Ikhadi losuku lweValentine oluphefumlelweyo yile nto bayifunayo. I-Cocktails ezinqabileyo zeTomTom azifakwanga (kodwa ungazenzela ngokwakho ngokucwangcisa ubusuku obunomxholo.)
Iklabhu yaMantombazana eDijithali Imithetho yeVanderpump Imithetho yekhadi leValentine, $ 8, Etsy.com
Yongeza oku kwinqwelo yakho ASAP ukuba wena kunye ne-SO yakho. Buxabise ubusuku obumnandi obuchithwa ekhaya. Zezona zilungileyo, ngapha koko.
USara M. Lyons Ndingathanda ukuhlala ekhaya ndingenzi nto namakhadi okubhala, i-16 yeedola ye-3, Umbutho6.com
Ukuba eli khadi likaSuku lweValentine elihlekisayo alwenzi ukuba uhlekwe, asazi ukuba yintoni eza kwenzeka.
Iphepha lomntu elibambayo ikhadi elimnandi lobudlelwane obude, $ 6, Etsy.com
Izipho zeminyaka eyi-1 zokukhumbula intombi
Ixesha le-tebow demi leigh kwi-peters
Yenza iziqhamo zakho zomtshato
owayetshatele ixilongo ngo-2005